राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रसँग किसुनजीका ऐतिहासिक संवाद - Nepal Bahas Nepal Bahas
स्थान : नारायणहिटी राजदरबारको प्राङ्गण । मिति : २०४७ कात्तिक २३ गते शुक्रबार । २०४७ को संविधान जारी गर्न स्व. राजा वीरेन्द्रले आफ्नै खल्तीबाट एउटा पत्र निकालेर शाही घोषणा गरेपछि सकिएको छ । यो संविधानका पक्षमा तत्कालीन राजदरबारमा शक्ति खेलाएर र शान देखाएर बसेका कसैको रुची थिएन । तैपनि सो दिन मुलुकको सत्तावृत्तका महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूमा चियाको चुस्कीसहित नयाँ संविधानप्रतिको खुल्दुली, भेटघाट र चर्चा भइरहेको छ । फोटो शेसनका लागि रानी ऐश्वर्यलाई त्यही भीडमा खोज्न राजा वीरेन्द्र, ‘एकैछिन, म वाइफलाई बोलाएर ल्याउँछु’ भन्दै आफै खोज्न गएको बेला राजाले ‘वाइफ’ भनेको सुन्नेहरू आश्चर्य मान्दैछन् । त्यसै समयमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) र तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको जम्काभेट हुन्छ । किसुनजी अधिराजकुमारलाई अदबका साथ अभिवादन गर्नुहुन्छ । भेटघाटमा भएको संवादमा ‘क’ ले किसुनजी, ‘ब’ ले वीरेन्द्र र ‘ज्ञ’ ले ज्ञानेन्द्र भन्ने बुझाउँछ ।
‘क’ : (अपर्झट भएको भेटमा के बोल्ने भन्ने आतुरताको मनोविज्ञान देखाउँदै, तर हँसिलो र ठट््यौलो मुद्रामा) सरकारको निवास त बडा सुन्दर छ भन्ने मलाई लाग्छ । म त्यो बाटोबाट हिँड्ने गर्दा मोटरको झ्यालबाट एकपटक सरकारको निवासलाई हेर्ने गर्छु, बडा सुन्दर लाग्छ । त्यस्तो ठाउँमा बस्दा मन काव्यात्मक भइदिन्छ । त्यसैले त सरकारबाट राम्राराम्रा गीत कविता रचिबक्सेको रहेछ ।
‘क’ : सरकारको बधाई तथा अनुग्रहपूर्ण शुभकामना पाउँदा म आभारी छु सरकार । यो संविधान एउटा सन्तुलनको बिन्दुमा अडिएको छ । यसलाई लागु गराउने र सफल बनाउनेमा सबैबाट सहयोग मिल्नुपर्छ । मलाई (सहयोग) मिल्नेछ भन्ने भरपूर आशा र भरोसा छ । यो संविधानको दुरूपयोग गरियो भने योभन्दा खराब संविधान अरू हुनै सक्दैन, र ऽऽ अर्को संविधान पनि आउन सक्दैन, आएपनि त्यसको एक्सेप्टेबिलिटी (स्वीकार्यता) रहँदैन । तर यो संविधानको सदुपयोग ग¥यौं भने दुनियाँमा योभन्दा बडिया संविधान पनि कुनै हुनेछैन ।
(यत्तिकैमा फोटो सेशनका लागि सरिक हुन दरबारका प्रमुख संवाद सचिवबाट अनुरोध आउँछ, दुबैजना फोटो सेशनका लागि दुबैले एक अर्कालाई अघि लाग्न हातले इशारा गर्छन, अन्तमा प्रधानमन्त्री अघिअघि अधिराजकुमार थोरैपछि भएझैं प्रायः सँगसँगै जान्छन् । प्राङ्गणको समारोह सकिएपछि राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री भट्टराईबीच दरबारको कुनै बैठककक्षमा आधाघण्टा भेट र संवाद हुन्छ । राजा वीरेन्द्र आज निकै हँसिलो र पूmर्तिलो देखिँदैछन् । यो संवादमा प्रयुक्त ‘क’ ले किसुनजी र ‘ब’ ले बीरेन्द्र भन्ने बुझाउँछ ।)
‘क’ : सरकार, सारा देश र दुनियाले आज हामीलाई हेरिराख्या छ । सरकारको अनुग्रहपूर्ण योगदानले, भगवानको कृपाले र हाम्रा साथीहरूको, म बामपन्थी साथीहरूलाई त्यति नै भन्छु, तऽऽऽ सबैको कृपापूर्ण सहयोगले जनआन्दोलनलाई सेफ ल्याण्डिङ् दिन एउटा पक्ष पुरा गर्ने काम भा’छ । हाम्रा सर्वमान्य नेता गणेशमानजीको अर्को महत्वपूर्ण निर्देशन हामीलाई यो छ किऽऽ म अब कम्पलसरीली आम निर्वाचनमा लाग्नुपर्छ ।
‘ब’ : प्रधानमन्त्री, हामीलाई पनि मुलुकमा मोर डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई गति दिने इच्छाले यो काम सफल भएकोमा खुशी लागिरहेको छ । मेरो इच्छा छ, मुलुकलाई यही संविधान मातहतबाट डेमोक्रेसी, स्ट्याबिलिटी र डेभलप्मेण्ट दिनुपरेको छ । डेभलप्मेण्ट बिनाको डेमोक्रेसी निरर्थक हुन्छ । यसबारेमा मेरो बीपी कोइरालासँग धेरै कुराकानी भएको थियो । यो दिन ता उहाँले पनि देख्न पाए यो मुलुकलाई कति राम्रो हुन्थ्यो । …..यो कन्स्टिच्यूसनबारे हाम्रो अर्को पनि सन्तुष्टिको कारण छ, कुनै पनि कन्स्टिच्यूसनले आइदर इन लेटर अर् इन स्पीरिट त्यो देशको के भन्छ, जिओ–पोलिटिकल रियालिटीलाई समातेको हुनुपर्छ, त्यो यस (संविधान) मा छ ।
‘क’ : सरकार, म त एउटा पोलिटिकल एक्टिभिस्ट । जीवनभरि कन्स्टिच्युसनल मोनार्की र पार्लियामेण्टरी डेमोक्रेशीको स्थापनाका लागि हिँडेको मान्छे । बडा मेहनत र जेलनेल गर्नुप¥यो, लामो तपस्या नै भयो । तर हामीलाई यसबारे थोरबहुत ज्ञान भएपनि अनुभव नगण्य छ । संविधान बमोजिम काम गर्दैजाँदा विलफुल्ली नभए पनि भुलचुकबस गल्ती होला, त्यो बेला दरबारले ठानिदेला किऽऽऽ प्रधानमन्त्री वा सिंहदरबारमा बसेका मान्छेहरू अर्कै बाटो हिँड्न लागे कि ! म सरकारलाई एस्योर गर्न चाहन्छु, त्यसो हुनेछैन । यो संविधानले सिंहदरबारबाट संवैधानिक राजतन्त्रको ग्यारेण्टीको इच्छा गरेको छ र राजदरबारबाट पनि पार्लियामेण्टरी डेमोक्रेशीको ग्यारेण्टी खोजेको छ । एज अ प्राइमिनिस्टर एण्ड मिनिस्टर फर रोयल प्यालेस अफेयर्स् अफ न्युली इस्टाब्लिश्ड डेमोक्रेसी, म सचेत छु सरकार, किऽऽऽ श्री ५ लाई भेट्न जाँदा प्रधानमन्त्री जनताको प्रतिनिधि भएर राजदरबार जान्छ, राजदरबारमा श्री ५ लाई भेटेर फर्किँदा राजाको सन्देशवाहक भएर फर्किन्छ…..। सरकारलाई संस्कृतमा कत्तिको रूचि छ सरकार ? संघगीतामा एउटा श्लोक छ !
‘ब’ : संस्कृतमा धेरै नै रूचि छ, सानो छँदा घरैमा अलिअलि पढेको, पछि आफैले पढेँ । स्टुडेन्ट हुँदा पढ्ने मौका त्यति भएनछ । तर पढ्छु, सुनुँ न त्यो श्लोक…..।
‘ब’ : अँ राम्रो रहेछ, लेखेर पाउँ न, म यहाँभित्र (राजदरबार) का (कर्मचारी वा सहयोगी) हरूलाई पनि यो बाँडिदिन्छु । ……..हामीलाई पनि कन्स्टिच्युसनल मोनार्कीको अनुभव छैन । अनुभव नहुँदा कहिलेकहिँ मिस अण्डरस्ट्याण्डिङ् पनि हुनसक्छ । हामी चाहन्छौं कि त्यसो नहोस् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले हामीलाई संविधानअनुसार यो यसो हो भनेर परामर्श दिँदै रहनुपर्छ । यो एक अर्कामा एक्स्चेन्ज अफ भ्युज र शेरीङ्को काम पनि हो । हामीबाट हाम्रो सरकारलाई पूरा सहयोग रहन्छ । तपाईहरूले लागेको देखेको कुरा हामीलाई भन्नुपर्छ । यो त डेमोक्रेटिक कल्चर इस्टब्लिश गर्दैजाने प्रोसेस पनि हो । …..अब एकछिन् म प्रधानमन्त्रीसँग पर्सनल कुरा पनि गर्न चाहन्छु, हेल्थ के कस्तो छ पीएम्को ?
‘क’ : भगवानको कृपाले हेल्थ बडा ठीक छ सरकार, म त आफुलाई बुढो भन्नै चाहन्न, म भुतपूर्व युवक हुँ भन्छु, इनर्जेटिक नै छु (राजा वीरेन्द्र निकै राम्ररी हाँस्छन्, किसुनजीको अनुहारमा पनि निकै हाँस्यमुद्रा देखिन्छ) । मलाई नो सुगर, नो हाइपरटेन्सन् । म कहिलेकहीँ दुईपेग ह्विस्की पनि लगाइदिन्छु । आज मलाई ठूलो भारी बिसाएको सुखानुभूति भइरहेको छ, सरकारसँग म कुनै बेला चियर्स् गर्न चाहन्छु । मैले सत्याग्रह (२०४२) पछि चैं चुरोट छोडेको छु, नो टोबाको ।
‘क’ : सरकारका पूर्वज गोर्खाबाटै भएझैं म गोर्खाकै भट्टराई हूँ (राजा वीरेन्द्रले बीचमा टाउको हल्लाउँदै ‘अँ गोर्खा’ मात्र भने) । हाम्रा पूर्वजहरू पृथ्वीनारायण शाहसँगै यता आएका हुन् । ०१५ सालको आम निर्वाचन मैले गोर्खाबाटै लडेँ, सवा तीनसय भोटले म पराजित भएँ ।
‘क’ : सरकारबाट दर्शनभेटका लागि बोलाईबक्सेको यस अवसरमा मलाई बडा खुसी लाग्या छ । दरबार हत्याकाण्डले सरकारलाई अभैm शोक र पीडामा पारिरहेको होला । यहीबेला मुलुकको जिम्मेवारी सम्हाल्नु छ । मुलुकमा आएको यस्तो दुःखद अवस्थामा सरकारलाई हामीजस्ता कमनरले के मद्दत गर्न सक्छौं ?
‘ज्ञ’ : किसुनजीलाई कहाँ कमनर भन्न मिल्छ र ! तपाई स्टेट्सम्यान हुनुहुन्छ, हामी सबैले विशेष इस्टीम दिनुपर्ने, दाजु (राजा वीरेन्द्र) बाट त्यही हुकुम हुने गथ्र्याे । अँ त्यो घटनाको कुरा भन्नुभयो, यस्तो हर्टब्रेक त कहिले निको हुने र ! तै पनि सम्हालिनु पर्छ, आफ्नो दुःखलाई लुकाएर देश र जनताको (दुःख) चाहिँ हेर्नैपर्ने रहेछ । हामीलाई त आँशु खसाल्ने हक पनि छैन ।
‘ज्ञ’ : मैले त केही सोच्नै नपाई यहाँ आउनुप¥यो (राजा हुनुप¥यो— सं.) । स्थिति एकदम जटिल छ । यो स्थितिमा तपाईजस्ता जिम्मेवार पोलिटिसियनहरूसँग कुरा गरौं । सबैका सल्लाहले एउटा वेआउट निकालौं भन्ने मेरो विचार हो । म किसुनजीलाई एउटा कुरा सोधिहाल्न चाहन्छु, के माओवादीहरूलाई मेनस्ट्रिम पोलिटिक्समा ल्याउन सकिएला ?
‘ज्ञ’ : बाध्यता नै भन्न त म चाहन्न, फकाएर हुन्छ कि उनीहरूका कतिपय कुरा (माग) लाई पूरा गरेर पनि हुनसक्ला, त्यही तपाईसँग पनि सल्लाह र निष्कर्ष बनाउँ भनेर । माओइस्टहरूसँग वार्ताको प्रयास तपाई पीएम् हुँदा नै पहिलोपटक भएको रहेछ । त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिएला ?
‘क’ : यो चिन्ता सरकारको हो र, त्यो त इलेक्टेड गभर्मेन्ट छँदैछ, त्यसैको पो हो त ।
‘ज्ञ’ : मैले माने । तर गभन्र्मेन्टलाई सहयोग पु¥याउनु पनि त हाम्रो कर्तब्य होइन र ?
‘क’ : त्यो त हो, यो के छ भने हामीबाटै बिग्रिरहेको देख्छु म त । साथीहरू (विभिन्न पार्टीका नेताहरू— सं.) यसलाई गभन्र्मेण्टको समस्या भनिदिन्छन् । गभन्र्मेण्टमा बसेकाहरू यो त गृहमन्त्रालयको समस्या पो उसले गर्नुपर्छ भनिदिन्छन् । गृहमन्त्रालयमा बसेकाहरू यो त पुलिसको समस्या हो भनेर पन्छिन्छन् । अनि पुलिसमा पनि कुनै सोर्सफोर्स नभएर सुरक्षित ठाउँमा बसेर काम गर्न नपा’को निरिह पुलिस थ्रीनटथ्री राइफल बोकेर लड्नुपरेको छ । सिभिलियन पुलिसलाई पारामिलिटरी फोर्सको काम लगाएपछि बेचाराहरू धेरै मरिरहेका छन् ।
‘ज्ञ’ : त्यो पनि हो, अनि दाजु (राजा वीरेन्द्र) ले पनि धेरै पेसेन्स् लिएर पर्खिबक्स्यो । तर कुनै चेन्ज देखिएन । त्यहाँ (माओवादीभित्र– सं.) फोरन इलिमेन्टको धेरै इन्फिल्ट्रेसन भइसकेकोले उनीहरूलाई पनि सेफ ल्याण्डिङ्को बाटो चाहिएको छ भनेर रिपोर्ट दिन्छन् । अब म दाजु झैं टुलुटुलु हेरेर बसिरहन सक्दिन । मेरो आफ्नै दिमाग जे छ त्यसैका आधारमा केही प्रयास गर्छु । एउटा नेपालीले अर्को नेपाली मारिरहेको यो दुर्दशा कति हेरेर मात्रै बस्ने ?
‘क’ : आफ्नै दिमाग हुनु त राम्रो हो सरकार । तर यो संविधानमा सरकारबाट बेग्लै सक्रियता देखाउने ठाउँ कहाँनेर छ ? त्यसका लागि संविधानलाई ओभरटेक गर्नुपर्छ, त्यो भनेको टेकओभर हो । यदि संविधान उल्लङ्घन भयो भने त म असी वर्षको बुढो एक्लै भएपनि विरोध गर्नेछु । त्यो बेला हामीजस्ताले बस्ने उचित ठाउँ कारागार नै होला । म त्यतै जान्छु र उतै मरूँला ।
‘क’ : सरकारले इलेक्टेड गभन्र्मेन्टलाई सल्लाह दिने, अनुभव सुनाउने, सचेत गराउने, देशको परिस्थितिबारे जायजा लिने र गभन्र्मेन्टलाई सफल बन्न आफ्नो तर्फबाट सहयोग पु¥याइदिने हो । अरू जे गर्नुछ, गभन्र्मेन्टले गर्छ । यश अपयश जे मिल्ने हो उसैलाई मिल्छ ।
‘ज्ञ’ : मैले त्यहाँभन्दा उता जान खोजेको मिसअन्डरस्ट््याण्डिङ् बिल्कुल नहोस् । यो संविधानको डिमार्केशन नाघेर जाने हाम्रो कुनै कल्पना वा इच्छा छैन । हामी सबैले यसैलाई सफल बनाउने हो । हामीले जस्तै सरकारले आफ्नो कामको डिमार्केशन र यो संविधानको सार्थकताबारे सोचिदेओस् ।
‘क’ : यदि यसै हुन पायो भने त बडा राम्रो हुनेछ । अब यसै होस् ।
—चन्द्रमणि गौतम (स्व. किसुनजीसँग विभिन्न समयमा भएका कुराकानीमा आधारित)
द्रष्टब्य : प्रस्तुत सामग्री गत फाल्गुन २० गते किसुनजीको नवौं पूण्यस्मृति दिवसका लागि प्राप्त भएको थियो । कारणवश ढिला भएपनि विषयवस्तुको महत्वलाई ध्यानमा राखी प्रस्तुत गरिएको छ । -सम्पादक
##krishna prasad bhattarai
#king gyanendra shah